बसको सिट सफा, फराकिलो होस्, उभिएरै यात्रा गर्दा पनि समाउने ठाउँ, सिट खाली होस् वा भरि बसस्टपमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्रै गरोस्, यात्रुसँग गर्ने व्यवहार नम्र होस् भन्ने यात्रुको चाहना हुन्छ
भाद्र २६, २०७५ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्छन् । स्वास्थ्य जाँच गराउन अस्पताल जाँदा होस् या कपनस्थित पार्टी कार्यालय जान । उनी सधैं भाडाकै सवारीमा यात्रा गर्छन् । उनी कहिले टेम्पो र माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्छन् भने कहिले ठूलो बसमा । पछिल्लो समय कोचिएर भए पनि ठूला बसमा यात्रा गर्न पाउँदा अलि सहज भएको उनी महसुस गर्छन् ।
‘कोचाकोचमा यात्रा गर्ने बाध्यता हटेको छैन,’ उनले भने, ‘अझै सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ ।’ यातायात व्यवसायीले सेवाभन्दा पनि नाफालाई जोड दिएको उनको आरोप छ । उनीजस्तै सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्नेमा डा. गोविन्द केसी पनि हुन् । कामबाट फुर्सद मिलेपछि भेटघाटमा हुँदा होस् या किनमेल गर्न बजार जाँदा । उनी भाडाकै बस चढ्छन् । राजधानीमा ठूलो बस सञ्चालन गर्न थालेपछि कष्टपूर्ण यात्रा केही हदसम्म कमी भएको उनको अनुभव छ ।
‘विगतको तुलनामा सार्वजनिक यातायातमा केही सुधार भएको पक्कै हो,’ उनी भन्छन्, ‘१० सिटको सानो माइक्रोमा समाउनै नमिल्ने गरी कोचिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ ।’ केसी रत्नपार्क, पुल्चोकतिर आउनुपर्‍यो भने साझा यातायात चढ्छन् भने सुकेधारामा आमा र आफन्तलाई भेट्न जाँदा भने नेपाल यातायातलगायत अरू ठूला बसमा यात्रा गर्छन् ।
बसका स्टाफले यात्रुसँग गर्ने व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेमा भाडाका सवारी पनि उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् । ‘यात्रु चढेकै कारण उनीहरूको जीविकोपार्जन भइरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बसका स्टाफले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।’
उमेरले पाका चित्रबहादुर केसी र डा. गोविन्द केसीले पछिल्लो केही वर्ष सार्वजनिक यातायातमा सुधारको संकेत देखेजस्तै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्त पनि ठूलो बसको व्यवस्थासँगै सर्वसाधारणको सहज यात्रा हुन थालेको बताउँछन् । ‘ठूलो बसले केही हदसम्म सहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन रुटमा कति बस चाहिन्छ ? अहिले कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? अध्ययन पनि सुरु भएको छ । यसले थप सुधार गर्न सघाउ पुग्ला ।’ सर्वसाधारण सहज रूपमा यात्रा गर्न चाहन्छन् । उभिएरै भए पनि सहजै यात्रा गर्न होस् भन्ने सबैले चाहन्छन् । बसका सिट सफा, फराकिलो होस्, उभिएरै यात्रा गर्दा पनि समाउने ठाउँ, सिट खाली होस् वा भरि बस स्टपमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्रै गरोस्, यात्रुसँग गर्ने व्यवहार नम्र होस् भन्ने यात्रुको चाहना हुन्छ । तर, यातायात व्यवसायीले यात्रुको चाहना बुझ्ने कोसिस अझै गर्न सकेको छैन । सरकारले पनि यात्रुको भावनाअनुुसार यातायात नीति बनाउन सकेको छैन । अरू व्यवस्था केही गर्न नसके पनि सरकारले पछिल्लो पटक ठूलो बस सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहन भने गरेको छ । यसले केही हदसम्म सुधारको संकेत देखिएको छ ।
०७० वैशाख १ देखि हरियो रङको १६ वटा बस काठमाडौंको सडकमा गुड्न थाल्दा सिन्डिकेट लाद्ने र सर्वसाधारणलाई असहज यात्रा गराउने यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिए । साझाको बस लगनखेलबाट महाराजगन्ज, नयाँ बसपार्कर कलंकीबाट एयरपोर्ट चल्दा तोडफोड गर्नसमेत पछि परेनन् । साझाका नयाँ बस फराकिलो, उभिएर यात्रा गर्दा पनि सहज थियो । यो सुविधा अरू बस र साना सवारीमा थिएन । सर्वसाधारणले कुरेरै भए पनि साझाकै बस चढ्न थाले ।
सर्वसाधारणले भाडाको सवारीमा छिटो यात्रा गर्न चाहन्छन् । भाडाका बस होस् या माइक्रो सिट फुल भएर पनि यात्रु उभिएपछि मात्रै भरिएको ठान्छन् । यही बीचमा चक्रपथ परिक्रमा गर्ने गरी महानगर यातायात सुरु भयो । महानगरको नयाँ बसमा यात्रा गर्दा नयाँ बस, छिटो र सहज यात्राले यात्रुलाई लोभ्यायो । यात्रुको चाहना महानगर भएपछि कतिपय थोत्रा बसले पनि महानगरको बसमा लगाइएको रङ नै लगाएर यात्रु तान्नसमेत खोजे । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन लागेको छ ।
यातयात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख वसन्त पन्तका अनुसार पछिल्लो केही महिनायता २ सयभन्दा बढी ठूला बस सञ्चालन हुन थालेका छन् । काठमाडौंको भित्री सडक हुँदै थानकोट, साँखुसम्म बस चल्न थालेको छ । काठमाडौंको भित्री सडकबाट यात्रु लिएर साँगा नाका हुँदै पाँचखालसम्म एसीसहितको बस चल्न थालेको छ ।
रत्नपार्क–लैनचौर–बसपार्क खण्डमा चल्ने २६ वटा माइक्रोबस र सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–रत्नपार्क खण्डको चल्ने ३५ वटा टेम्पोलाई हटाएर ठूलो बस सञ्चालन गरिएको छ । यसरी ५० यात्रु क्षमताका बस मात्रै गुड्ने रुट सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–मैतीदेवी–डिल्लीबजार–रत्नपार्क–लैनचौर–सामाखुसी–गोंगबु हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म रुट कायम गरिएको छ । सोही बस नयाँ बसपार्कबाट गल्कोपाखा–लैनचौर–जमल–तीनधारा–कमलपोखरी–ज्ञानेश्वर–मैतीदेवी–पुरानो बानेश्वर हुँदै सिनामंगल पुग्नेछ । पुरानो रुटमा चल्ने माइक्रो र टेम्पोलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्ने काम भइरहेको पन्तले बताए । साझा यातायातमा पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेको पनौती, धुलिखेलसम्म सेवा दिने ४७ वटा बस छन् । साझाका प्रबन्धक महेन्द्र पाण्डेका यी बसबाट स्वयम्भूबाट पनौती, धुलिखेल, लामाटारबाट लगनखेल हुँदै नयाँ बसपार्क, गोदावरीबाट रत्नपार्क, बूढानीलकण्ठबाट बुङ्मती र रत्नपार्कबाट थानकोटसम्म साझा यातायात चल्न थालेको छ । यसबाहेक यूरो ५ मापदण्डका २० वटा बस काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरी आउँदै छन् । काठमाडौं महानगरको सहयोगमा यी बस ल्याइन लागेको हो ।
साझा यातायातले साँगासम्म सेवा सुरु गरेलगत्तै भक्तपुर मिनी बसले समेत २० वटा ठूलो बस सञ्चालन गर्‍यो । समितिको बस भक्तपुरबाट बानेश्वर कलंकी, अर्को गौशाला हुँदै नयाँ बसपार्क सञ्चालन हुन्छ । मिनी बस समितिका सचिव प्रकाश बस्नेतले थप ३० वटा बस आउने क्रममा रहेको बताए । अन्नपूर्ण यातायातलेएकान्तकुना, धोबीघाट, बल्खु, कालिमाटी, कोटेश्वर, एकान्तकुना चल्ने लालुपाते यातायातका १० वटा ठूला बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यही यातायातले शोभाभगवती, कालीमाटी, जमल, गौशाला, कोटेश्वर र सातबाटो बल्खुबाट कुलेश्वर हुँदै शोभावगती पुग्ने १२ वटा ठूला बसबाट सेवा सुरु गरेको छ ।
हामी सबैको यातायातले लभु, ग्वार्को, सातदोबाटो, लगनखेल, रत्नपार्क हुँदै बूढानीलकण्ठसम्म चल्ने ठूला १२ वटा बस सञ्चालन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मयुर यातायातले ४२ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी बस चक्रपथ परिक्रम गर्दै धुलिखेलसम्म सञ्चालित छन् ।
बाबा गोकर्णेश्वरले साँखुबाट गौशाला, रत्नपार्क, कालिमाटी, बल्खु हुँदै दक्षिणकालीसम्म सेवा दिन १० वटा आधुनिक बस सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै रिद्धिसिद्धि यातायातले पनि १० वटा ठूला बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यातायात कार्यालयका अनुसार यी बसले मञ्जुश्री पार्क, एकान्तकुना, लगनखेल, रत्नपार्क, नारायणगोपाल चोक हुँदै बूढानीलकण्ठसम्म सेवा दिन्छन् । यही कम्पनीका ११ वटा बस थली, गोठाटार पेप्सीकोला, कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर, कलंकी हुँदै नागढुंगासम्म सञ्चालन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । समृद्ध यातायातले कलंकी, कालिमाटी, बानेश्वर, काटेश्वर हुँदै पाँचखालसम्म १० वटा बस सञ्चालन गरेको छ । ‘१० भन्दा कम गाडी हुने यातायात कम्पनीले पनि सेवा सुरु गरेको छ,’ वाग्मती यातायात कार्यालयका प्रमुख पन्त भन्छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकामा यातायात सेवा दिन २५ वटा यातायात कम्पनी दर्ता भएका छन् ।’